Sina Dongshen ambongadiny spaonjy spaonjy tsy misy latsa-jaza manapotika volo miendrika volo malemy volo makiazy hatsaran-tarehy spaonjy blender mpanamboatra sy mpamatsy | Dongmei
Dongshen ambongadiny makiazy spaonjy latex-maimaim-poana oblique nanapaka endrika miendrika volo malemy volo makiazy hatsaran-tarehy spaonjy blender
Dongshen matihanina spaonjy blender blender, mavokely mitete miendrika oblique notapatapahina, latsa-poana makiazy sponjy blender dia vita amin'ny fitaovana PU, azo ampiasaina amin'ny maina sy mando, tsy misy vovoka, makiazy mahatsiaro ho marefo sy sariaka amin'ny hoditra, tsy misy mahasosotra ny hoditra .
● lafatra spaonjy makiazy ho an'ny makiazy iray manontolo: tampon-tondro mora ampiasaina amin'ny manodidina ny maso, molotra ary orona, ary ny tapany ambany amin'ny takolaka, ny handrina ary ny faritra hafa. Mahafatifaty sy mora entina izy io, mety amin'ny fampiasana an-trano, fitsangatsanganana.
● Blender spaonjy ho an'ny karazana kosmetika, fototra, crème BB, vovoka, fanafenana, fitokanana, ranoka, sns.
● Ity spaonjy vita amin'ny fitaovana PU kalitao ity, fahatsapana malefaka, natokana ho an'ny besinimaro, sariaka amin'ny hoditrao.
● Fampiharana tonga lafatra: spaonjy blender blender hatsaran-tarehy manome anao fampiharana makiazy tonga lafatra, ialao ny fandanosanan-tarehy.
● lena sy maina: ny spaonjy mifangaro mivadika lehibe kokoa rehefa lena, hosory tsara mba hamorona makiazy tsara tarehy.
● Azo ampiasaina indray ary maharitra: Mora ny manadio sy maina. Manoro hevitra anao izahay mba hanadio azy isaky ny ampiasaina ary soloinao ny spaonjy mpangataka makiazy isaky ny 2 volana, ary aza hadino ny fipoahana.
Malemy sy malefaka
Ny fitaovana tsy manam-paharoa dia mahatonga an'i Dongshen lasitra spaonjy blender bouncy ary koa malefaka, manakaiky ny fiononan'ny hoditra.
Ny spaonjy malefaka dia manome anao malefaka ary mifangaro mihitsy, izay miantoka ny fampiharana tsy misy ratra sy tsy misy dikany miaraka amin'ny fako vokatra kely indrindra.
Avo roa heny ny habeny rehefa lena
Mandrosoa tanteraka spaonjy hatsaran-tarehy Dongshen, hantsaka rano be loatra, hitombo habe tokony ho roa heny aorian'ny rano izy io.
Ilay mando dia hisitrika faran'izay kely ny makiazy tianao, ary hahatsapa ny elastika sy ny malefaka manaraka ianao.
Safidy tsara ny mamela anao hanana endrika voajanahary sy vaovao.
Fampiasana maina sy lena
Fampiasana maina: mety amin'ny makiazy vovoka, toy ny blush, vovoka malalaka, soritr'aretina sns.
Fampiasana lena: tonga lafatra amin'ny makiazy ranoka, toy ny crème BB, fanafenana, fototr'aretina sns.
Asio makiazy ranon-javatra amin'ny tarehy, ampiasao ny spaonjy lena handosehana tsara ho an'ny fampiharana tsy misy kilema. Raha manao hadisoana ianao dia ampiasao spaonjy maina hanala mora foana ny tarehy fanosotra.
Ahoana ny fanadiovana ny spaonjy makiazy:
Hamarino tsara fa diovina amin'ny rano mafana ny spaonjy aorian'ny fampiasana azy mba hisorohana ny fihanaky ny mikraoba.
1.Aza manodinkodina ny vokatra rehefa manadio ny vokatra. Potsero moramora amin'ny tanana ny rano mba hisorohana ny fantsika tsy hikororohany spaonjy.
2. Asio mpanadio vitsivitsy eo amboniny, ary alao moramora amin'ny alàlan'ny rantsantanana mba hamoahana ny sisa tavela amin'ny makiazy.
3. Sasao eo ambanin'ny rano mandeha ny spaonjy mandra-pahatonga ny rano hitsoaka.
4. Fidio ny hamandoana tafahoatra ary maina ny rivotra.
Azafady mba ovao ny sponsanao mandritra ny 30 andro mba ho salama kokoa.
Teo aloha: Dongshen matihanina spaonjy spaonjy milatsaka endrika latina-tsy misy fotony PU fototra fanatsarana tarehy spaonjy blender blender
Manaraka: Dongshen makiazy mpanamboatra ambongadiny ambongadiny volon'osy varahina ferrule volondavenona hazo tantana borosy makiazy napetraka fitaovana makiazy
Wholesale Spender Blender